Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l1312 lat
Mandritry ny arivo taona
Alatsinainy 24 Des.
Vakio indray ny Apôk. 20:4–6. Inona no porofo hita ao, izay mampiseho amintsika fa mivelatra (‘unfolds’) any an-danitra ny arivo taona (fara faharatsiny ho an’ny olom-boavonjy)?
Ampahany voafaritra mazava tsara amin’ny vondron’ireo olona izay handray anjara amin’ny arivo taona no lazaina hoe “fanahin’izay notapahin-doha noho ny filazana an’i Jesosy sy ny tenin’Andriamanitra sy izay rehetra tsy niankohoka teo anoloan’ny bibidia na teo anoloan’ny sariny ary tsy nandray ny marika ho eo amin’ny handriny na ho eo amin’ny tanany.” Fantatsika Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito fa ny Baiboly dia tsy mampianatra ny fisian’ny fanahy mahatsiaro, tsy mety maty, mitokana/misaraka amin’ny vatana. Io andalan-teny io kosa dia maneho ny sarin’ireo izay nandalo fanenjehana araka izay aseho ao amin’ny Apôk. 12:17–-13:18. Miverina amin’ireo fanahy niaritra fanenjehana ireo indray ny ainy amin’ny fiavian’i Kristy fanindroany (amin’io fotoana io no mitranga ny fitsanganana voalohany), ary aorian’ny fitsanganana amin’ny maty, dia hanjaka any an-danitra miaraka amin’i Kristy izy ireo (ampitahao amin’ny 1 Tes. 4:15–17).
Misarika ny saintsika ho amin’ny toe-javatra iray hafa mitranga mandritra ny arivo taona ny Apôk. 20:4, raha milaza amin’ny fomba manokana izy fa homena ny voavotra ny fahefana hitsara. Noho ny fahafantarana fa manjaka miaraka amin’ny Tompony ireo olona nahatoky, ary ny ratsy fanahy kosa maty tsy nahatanty ny famirapiratan’ny fiavian’i Kristy, karazana fitsarana manao ahoana io ary inona no tanjona kendreny?
Anankiray amin’ireo zavatra telo nifantohantsika tamin’ny herinandro lasa (tamin’ny Alatsinainy) ny fitsarana izay mifandray amin’ny asa fanompoana ataon’i Kristy ao amin’ny fitoerana masina any an-danitra mialoha ny fiaviany fanindroany. Io fitsarana io dia hafa noho ny fitsarana ao amin’ny Apôk. 20:4, izay tsy inona fa fahatanterahan’ny teny fikasan’i Kristy ao amin’ny Mat. 19:28, ary izany dia mitovy amin’ny fanambarana ataon’i Paoly hoe hitsara izao tontolo izao ny olona masina (1 Kôr. 6:2,3).
Sarobidy sy maro lafy ny foto-kevitra momba ny fitsarana ao amin’ny Baiboly. Misy dingana telo ny fitsarana farany: ilay mifandray amin’ny asa fisoronana ataon’i Kristy any amin’ny fitoerana masina any an-danitra no voalohany amin’ireo. Fitsarana famotopotorana no iantsoan’ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito io dingana eo amin’ny fitsarana farany io. Manaraka izany ny dingana fandinihana indray ny didim-pitsarana navoaka, izay resahina ao amin’ny Apôk. 20:4 sy 1 Kôr. 6:2,3; mandritra ny arivo taona no anaovana izany fandinihana izany. Hanana tombontsoa ny voavotra, eo amin’io dingana io, handinika ny lalan’Andriamanitra sy ny didim-pitsarana navoakany mikasika ireo olona nikomy. Ny dingana fanatanterahana ny voalazan’ny didim-pitsarana no dingana fahatelo eo amin’ny fitsarana farany; izany no anisan’ireo toe-javatra hitranga amin’ny fiafaran’ny arivo taona.
Ataovy mby ao an-tsaina mandrakariva izay novakinao androany eo am-pamakiana ny 1 Kôr. 4:5. Inona no fanantenana lehibe hita eto manoloana ireo fanontaniana tsy voavaly maro be ananantsika?